Julen Lopetegui oo heysta toddobo maalmood si uu siddeed ciyaarayahan mustaqbalkooda,,,,, – Qardho Online
August 24, 2018 Sharmaarke Hiiraan Ciyaaraha 0
Macallin Julen Lopetegui ayaa hadda heysta saf ka kooban 27 ciyaaryahan oo ay qayb ka yihiin shan goolhaye.
Toddobo maalmood oo qura ayaa ka harsan inuu xirmo suuqa kala iibsiga ee qaaradda Europe, waxaana macallinka cusub ee Real Madrid uu u baahanyahay saf ka kooban keliya 25 ciyaaryahan xilli ciyaareedkan cusub.
Lopetegui ayaa go’aan ka gaari doono safkiisa goolhayeyaasha oo hadda ay ki qoranyihiin Keylor Navas, Thibaut Courtois, Kiko Casilla, Andriy Lunin iyo Luca Zidane, waxaana sidoo kale uu go’aan ka qaadan doonaa Fabio Coentrao, Jesus Vallejo iyo xiddigo kale.
Haddaba siddeeddan ciyaaryahan ayuu macallinkii hore ee xulka qaranka Spain kala go’aansan doonaa:
Goolhayaha dhallinyarada ah ayaa ciyaaray 84 daqiiqo marka la isugu daro kullamadii ICC Cup iyo Trofeo Bernabeu, waxaana macquul ah inuu amaah ku fasaxo maadaama kooxaha Leganes iyo Rayo Vallecano ay xiiseynayaan 19-jirka reer Ukraine.
Imaanshiyaha Thibaut Courtois ayaa ka dhigtay in goolhaye Casilla uu u dhaco dookha saddexaad, waxaana baacsanaya Leganes iyo Sevilla.
Sidaas darteed waxaa macquul ah inuu amaah ku baxo.
Waa mid kale oo u muuqda inuu xilli ciyaareedkan ka ciyaari doono meel ka baxsan Bernabeu, inkastoo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ahaa goolhayaha dookha saddexaas isagoo saftay kullan ay Los Blancos la qaadatay Villarreal.
21-jirkan ayaa bandhig cajiib ah ka sameeyay kooxda reer Germany ee Entraict Franfurt xilli ciyaareedkii 2016/17, balse kama uusan soo dhalaalin Real Madrid xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, taas ayaana shaki gelineysa kalsoonida uu Lopetegui ku qabi karo wiilka kasoo jeeda magaalada Zaragoza ee dalka Spain.
Waxa ay u muuqataa in uu soo idlaaday waayihiisii Bernabeu, isagoo fasal ciyaareedyadii lasoo dhaafay amaah kusoo kala bixiyay kooxaha AS Monaco iyo Sporting CP, sida la filayana, 30-jirkan ayaa guud ahaan daaqadda ka bixi kara, balse waxa uu hadda sugayaa go’aan macallinkiisa.
Kalsoonida Lopetegui uu ku qabo xiddiggan ayaa ah mid daciif ah, maadaama laacibkan uu ku guuldarreystay inuu kasoo dhalaalo kullamadii isu diyaarinfa xilli ciyaareedka, waxaana laga door biday Dani Ceballos, inkastoo 23-jirkan uu ahaa beddelka Casemiro xilli ciyaareedkii hore, haddase waxa uu xiiso ka helayaa kooxaha Villarreal, Espanyol iyo Alaves.
Shaki kuma jiro xirfadda iyo bandhigga ciyaaryahankii hore ee Flamengo, balse waxa uu shaki badan ku jiraa inuu kooxda koowaad ka mid noqon doono, waxaana macquul ah in laga ciyaarsiiyo kooxda labaad ee Real Madrid Castilla.
Inta badan waa uu kasbaday kalsoonida Julen Lopetegui, waxaana uu keyd u yahay Karim Benzema balse macallinka kasoo jeeda gobolka Basque ayaa ay u badantahay in uu safkiisa kasii mid dhigi karo wiilka gooldhaliyaha ah, walow ay baadi goob ugu jirto Alaves haddii uu ka dhaqaaqayo caasimadda Spain.
Qardho online 2018